जयप्रकाशका सहयात्री दलबहादुर
भारतीय समाजवादीका लागि दलबहादुर प्रजापति अर्थात् ‘नेपाली बाबा’ सदैव प्रेरक छन् । उत्तर प्रदेश र विहारका पुराना पुस्तादेखि आजका नेतृत्वपंक्तिसम्मले ‘नेपाली बाबा’ को चर्चा गरिबस्छन् । तर, नेपालको सरहदभित्र ‘नेपाली बाबा’ छायामा छन् । दलबहादुरको स्मृति–दिवस चैत २९ मा उनको सम्झना :
बरु जनतामा जाऔं
तर्कले मानिसलाई केवल प्राधिकारसहित गलत गर्न मात्र सक्षम बनाउँछ ।’ बीबीसी टेलिभिजनमा १९६३ नोभेम्बरदेखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आइरहेको अति लोकप्रिय सिरियल डा. नोको चर्चित संवाद हो यो । कथानक प्रसंगलाई रोचक तरिकाले संयोजन गर्नका लागि यस संवादको आवश्यकता थियो होला, त्यसैले यसको आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरियो ।
दलहरूको आर्थिक हैसियत
यो मंसिर दलहरूको महाधिवेशन महिनाजस्तै भइदिएको छ । यस अवधिमा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशन सके, कांग्रेसको सकिने चरणमा छ । कानुनी बाध्यताले गर्दा दलहरूलाई आवधिक महाधिवेशनबाट पन्छिने सुविधा छैन । नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनबाट प्राप्त हुने वैधता अनिवार्य छ ।
चीनका ‘सिनचियाङ बूढो’ !
सन् २०१९ अप्रिलको अपराह्न । जेठो छोरा अनीशले एक जना विदेशी अतिथिलाई घरमा ल्याए । उनीसँगै थिए तीन जना चिनियाँ महिला । काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले विशेषतः ताओ धर्म, महासिद्धि, योगिनी तथा तिब्बती बौद्ध सम्प्रदाय निगमपा विषयक अभिसंवाद कार्यक्रम राखेको रहेछ । प्रमुख वक्ताका रूपमा चीनबाट नेपाल आइपुगेका विशिष्ट व्यक्ति थिए, उनी । काठमाडौं विश्वविद्यालयमै चिनियाँ भाषा प्रध्यापन गरिरहेको छोरा अनीशले अभिसंवाद कार्यक्रममा दोभासेको भूमिका निभाएपछि दुवैको चिनाजानी भएको रहेछ ।
पुनर्लेखनको मागनेपालले नयाँ संविधान अंगीकार गरेको छ वर्ष कट्यो । संवैधानिक विकासक्रममा यो अवधि लामो होइन । तर यति कम समयमै यस कानुनी अभिलेखका निर्णायक पात्रहरू स्वयंले यसमा हेरफेरको माग गर्दै सार्वजनिक चर्चा गर्न थालेका छन् ।
आदिवासी आन्दोलन : फर्केर हेर्दा
श्रावण २५, २०७८
समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको पूर्ण पाठ भरखरै सार्वजनिक भयो । यस फैसलाले आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
गायब टुँडिखेल काठमाडौं शान्तिपार्क, दक्षिणतिर भोटाहिटी भएर बागबजार जाने मूलबाटोसँगैको खुला ठाउँ शंखधर पार्क हो । राजाको शासनमा त्यसलाई रत्नपार्क भनिन्थ्यो । सँगै जोडिएको चउरलाई खुलामञ्च बनाइएको छ । त्यसभन्दा पर अलि फराकिलो ठाउँ सैनिक मञ्च बन्यो । सहिदगेट सडकपारिको सिंगो भूमि नेपाली सेनाको एकलौटी अधीनस्थ क्षेत्र भयो । सेनाको मुख्यालय यसै परिसरमा खडा गरिएको छ । आखिर, कहाँ छ टुँडिखेल ?
नागरिक आन्दोलनको मार्गचित्र
संविधान जारी भएपश्चात् सबैजसो दलका नेताहरूले उद्घोष गरेका थिए— नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ । अबको बाटो भनेको विकास, प्रगति र समृद्धि हो । राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भयो... । उनीहरूले दीपावली गरे, उत्सव मनाए । यद्यपि मधेसी, थारूसहित आदिवासी जनजातिहरू संविधानलाई लिएर खुसी थिएनन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा जुन खाले पद्धति अपनाए र प्रवृत्ति देखाए, मुलुकको मूल कानुन संविधानजस्तो दस्तावेज निर्माणका लागि त्यो किञ्चित् उपयुक्त थिएन ।
मानव जीवन, सभ्यता र समुन्नतिको आधार पानी नै हो । प्रागऐतिहासिक कालतिर नियाल्दा नाइल नदीको वरपर विकसित मिश्र सभ्यता, सिन्धु घाँटीको हरप्पा, मोहनजोदारो, ह्वांग हो नदी किनाराको चिनियाँ सामाजिक विकास, गंगा नदीको उर्वरभूमिका प्राचीन भारतीय सभ्यता यस्ता दृष्टान्तमध्ये हुन् । वाग्मतीको पानी सिञ्चनबाट व्यवस्थित भएको उपत्यकाभित्रको नेपालमण्डल सभ्यता पनि यस्तै प्रकारको एक हो ।
जनतालाई पर्दा कहाँ थिए यिनीहरू !
त्यस समय म काठमाडौंको जेपी हाइस्कुलमा पढ्दै थिएँ । एक दिउँसो कक्षा सञ्चालन हुँदाहुँदै एक्कासि हामी विद्यार्थीहरूलाई घर जान भनियो । साँझ घरमा ठूलाबडाको कुराबाट मैले थाहा पाएँ– राष्ट्रिय रंगशालामा तरुण दलको कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला गिरफ्तारीमा परेछन् । राजाको रेडियो सम्बोधन सुनेपछि जानकारी भयो– निर्वाचित संसद् भंग गरिएछ, संविधान निलम्बन गरिएछ ।